स्वास्थ्य जीवनको ३ सुत्र : आहार, विहार र विचार
Sun, Dec 8, 2019 at 12:45pm
साग महिला क्रिकेट : बङ्गलादेशलाई स्वर्ण पदक, श्रीलङ्का २ रनले स्तब्ध #आहा खबर# गौरिकाको नयाँ कीर्तिमान : सागको एउटै संस्करणमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली #आहा खबर# आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि कोहलपुर निषेधित क्षेत्र घोषित #आहा खबर# अबदेखि ठूलालाई पनि कानून लाग्छ : महान्यायाधिवक्ता खरेल #आहा खबर# बेलायती चुनावअघि दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, ब्रेक्जिट नै मुख्य मुद्दा #आहा खबर# साग : नेपालका २ खेलाडी जुडो खेलको फाइनलमा #आहा खबर# कोहलपुर तनावग्रस्त : ट्रकको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु, विद्यार्थीले ट्रक जलाइदिए, प्रशासनद्वारा कफ्र्यू आदेश #आहा खबर# नयाँ दिल्लीमा भिषण आगलागीः कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# नेपाल भ्रमण वर्ष : ५ हजार व्यक्तिलाई पर्यटकीय तालीम दिइने #आहा खबर# नेपालले बंग्लादेशसँग बराबर मात्र खेले पनि फाइनल पक्का #आहा खबर# नेकपा सचिवालय बैठक सोमबार बस्दै, कस्तो आउला तल्लो कमिटीबाट चुनावी समीक्षा ? #आहा खबर# ..त्यसपछी खुशीको सीमा रहेन #आहा खबर# कीर्तिमानी बालोन डी’ओर पछि मेस्सीको ह्याट्रिक, बार्सिलोनाको शानदार जित #आहा खबर# आज यस्तो छ तरकारीको भाउ - प्याज प्रतिकेजी १ सय ८५, बोडी... #आहा खबर# विरुवा होइन, रुख रोप्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी #आहा खबर#
बिहिवार, २३ श्रावन २०७६,	आहाखबर
काठमाडौँ, २३ साउन
निरोगी जीवन बाँच्न हामी सबै चाहन्छौं । सधै तन्दुरुस्त र जवान रहन चाहन्छौं । कुनैपनि रोग, कष्ट आदिबाट टाढा रहन चाहन्छौं । अस्पताल धाउनुपर्ने, औषधी खानुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने यावत् प्रक्रियाबाट मुक्त रहन चाहन्छौं ।
हामी चाहन्छौं, जीवनभर अस्पताल जान नपरोस् । औषधी सेवन गर्न नपरोस् । प्राकृतिक रुपमै निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन विताउन पाइयोस् ।
कसरी पाउने यस किसिमको जीवन ?
यसका लागि तीन वटा कडी छ, आहार, विहार र विचार । अर्थात उचित आहार, उचित विहार र उचित विचार ।
अहिले हामी स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भएका छौं । कस्तो खानपान गर्दा शरीर निरोगी हुन्छ भनेर खोजी गर्न थालेका छौं । आफ्नो छाकमा पोषिलो एवं सन्तुलित खानपान मिलाउने प्रयास गर्न थालेका छौं ।
यसैगरी व्यायाम, योग आदि गर्न थालेका छौं । यसरी हामी रोगमुक्त जीवन बाँच्ने प्रयासमा छौं । यद्यपि बेलाबखत हामी रोगको चपेटामा पर्ने गर्छौं । आखिर के कुरामा तालमेल मिलिरहेको छैन ?
खासमा समग्र शरीरलाई हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । खानपानको माध्यामबाट, शारीरिक व्यायामको माध्यामबाट, सोंच-चिन्तनको माध्यामबाट । मूलत यही तीन कुरामा हामी संयमित एवं अनुशासित भए पुग्छ ।
उचित आहार अर्थात सही खानपान । शरीरका लागि उचित खानपानको छनौट गर्नुपर्छ । उचित खानपान भनेको शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व भएको, सन्तुलित र सुपाच्य । खानाकै कारण शरीर निरोगी र जवान हुन्छ भने खानाकै कारण रोगको भण्डार पनि बन्छ । उचित खानपान औषधी सामान हो । अनुचित खानपान विष समान हो ।
खाना कस्तो खाने भन्ने कुरा हाम्रो पूर्खाहरुले तय गरिदिएकै छन् । आफु बसेको वातावरण, भूगोल अनुसार स्थानिय उत्पादन हाम्रो शरीरका लागि उपयोगी हुन्छ । साथै मौसमी खानेकुरा आवश्यक हुन्छ ।
खानपानको दैनिक तालिका पनि निर्धारण गरिएको छ । बिहानको खाना पर्याप्त र त्यसपछि क्रमस खानाको मात्रा घटाउँदै जानुपर्छ । सुत्नुभन्दा तीन घण्टा अघि भोजन गरेको उत्तम हुन्छ ।
यसरी उचित आहार अर्थात सही खानपान गरियो भने शरीर निरोगी र जवान रहन्छ । शरीरभित्र अनावश्यक विकार जम्न पाउँदैन ।
विहार अर्थात यात्रा । यसलाई दिनचर्या भनेर बुझ्न सकिन्छ । उचित दिनचर्या भनेको हाम्रो उठ्ने, बस्ने, खाने, खेल्ने, काम गर्ने, विश्राम गर्ने उचित तालिका हो ।
कतिबेला उठ्ने, कतिबेला सुत्ने, कतिबेला खाने, कतिबेला विश्राम गर्ने भनेर प्रकृतिले पनि तय गरिदिएको छ । प्रकृतिको लय अनुसार हामीले दिनचर्यालाई डोहोर्‍याउन सकेमा जीवन सुखी हुन्छ ।
विहान सूर्योदयअघि उठ्ने, योग, ध्यान, व्यायाम गर्ने, सही समयमा खानपान गर्ने, उचित शारीरिक श्रम गर्ने, सही समयमा विश्राम गर्ने । यस किसिमको सन्तुलित, अनुशासित जीवनशैलीले हामीलाई सुखी राख्छ । खुसी राख्छ ।
खानपान र दिनचर्या मात्र अनुशासित भएर पुग्दैन । शरीर शुद्धिकरण गरेर मात्र पुग्दैन । मन पनि शुद्ध हुनुपर्छ । मन प्रफुल्ल, शान्त र सकारात्मक हुनुपर्छ । यसका लागि खराब विचार त्याग्नुपर्छ ।
दम्भ, इष्र्य, लोभ, कामवासना, अहंकार जस्ता विकार त्याग्नुपर्छ । जब हामी यी विकार हटाउँछौं, मनमा करुणा, प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता पलाउँछ । सकारात्मक सोंच र चिन्तनले हामीलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ्य बनाउँछ । मन र शरीरवीच आपसमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ ।
त्यसैले शरीरसँगै मनलाई शुद्धिकरण गरेर हामी निरोगी जीवन पाउन सक्छौं ।
धार्मिक मान्यता र आयुर्वेदमा दिउँसोमा सुत्न किन अनुचित ?
एक्छिन्, मुख धुने पनि तरिका हुन्छ !
जाडोमा कपालको स्याहार गर्ने घरेलु तरिका
दम्पतीबीच हुने उमेर अन्तरले के फरक पार्छ जीवनमा ?
ओठ फुट्न नदिने के गर्ने ?
जाडो याममा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट जोगिन यी काम नगर्नुहोस्
महासचिव गुटेरर्सद्वारा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा व्यापकपरिवर्तन हुने गरी काम गर्न आह्वान
यस्ता छन् जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्ने उपाय
जाडोमा तिर्खा नलागे पनि पिउनु पर्छ प्रशस्त पानी
उपत्यकाको तापक्रम घट्दो क्रममा, शून्य डिग्रीमा पुग्ने मौसमविद्को अनुमान
हुम्लामा हिमपात सुरु, कतै मस्ती त कतै सास्ती
काठमाडौंमा पैदलयात्री : कपाल हल्लाउँदै, मोबाइल चलाउँदै, बाटो काट्दै
भारत पस्ने नेपालीको सधैं ओइरो, स्वदेशकै रोजगारीले पुग्ने दिन कहिले आउला ?
पश्चिम न्यून चापीय प्रणालीले मौसममा बदली, वर्षा र हिमपातकाे सम्भावना
ल्यापटपको आकार प्रकार अनुसार, कस्तो ल्यापटप किन्ने ?
कस्तो समस्या भएका बिरामीले करेला बिल्कुलै खानुहुँदैन ?
तनावपूर्ण गर्भधारणले छोरा हुने सम्भावना घटाउँछ : अध्ययन
जाडोबाट लाग्ने रोगबाट बच्नको लागि केही टिप्स !
मोटाउनु भएको छ ? यसरी घटाउनुस् सजिलै तौल
तन्दुरुस्ती जीवन कसरी पाउने ?
मेकअप गर्नुअघि यि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
करिब ४० लाख अष्ट्रेलियाली गम्भीर प्रकृतिको मानसिक समस्याबाट पीडित
बिक्न छाड्यो मादल, वादीको पेशा नै लोप हुँदै
देशभर चिसो बढ्दै, काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम १०.८ डिग्री
नछुनुस् यी अंगमा पटक–पटक !!
पण्डितले अब नागरिकता हेरर मात्र विवाह गराउने
कसरी बन्यो भुटान संसारकै खुशी र शान्त देश ?
अमिक शेरचन : निडर, इमान्दार, सदाचार र सादगी नेता
फिटनेसको लागि कस्तो खानपान ? पूर्ख्यौली गुणको प्रभाव अनौठो !
जाडो मौसममा छाला र ओठ कसरी नरम र चम्किलो राख्ने ?
तिहार विशेष : पशुपक्षीलाई १ दिनको पूजा र माला !
बेलायती चुनावअघि दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, ब्रेक्जिट नै मुख्य मुद्दा